पीडामाथिको पीडामा इस्माका बालबालिका ! – इन्सेक
पीडामाथिको पीडामा इस्माका बालबालिका !
०७६ मङ्सिर २२ गते
गुजुप्पको बस्ती । इस्मा गाउँपालिका–४ को पैयाँपाटा । दुई घर बाहेक सबै कार्की । तीन वर्षमा एक पटक आउने कुलपुजाले सबै परिवार खुसी थिए । देश परदेशबाट आएका अभिभावक र छोराछोरीले कार्की गाउँको उमङ्ग फरक नहुने कुरै भएन । समुदाय अनुसारको कुल पुजा ठुलो पर्व नै भएकाले स्वभाविक पनि थियो । दुर्भाग्य त्यो खुसी धेरै दिन टिकेन । मङ्सिर १७ गते कुलपुजाकै लागि हिँडेका कार्की परिवार चढेको जिप बाग्लुङको बडिगाढ गाउँपालिका–७ मा दुर्घटनामा प¥यो । दुर्घटनामा एउटै गाउँका १५ जनाले ज्यान गुमाए । तीन जना उपचारको लागि काठमाडौँ छन् । अहिले कार्की गाउँका अधिकांश घर शोकमा परेका छन् । केही घरका दुई-तीन जना नै दुर्घटनामा परेका छन् । जसका कारण सहयोग गर्ने मान्छेसम्म गाउँमा नभएको सोही गाउँका बद्री कार्कीले बताउनुभयो । ‘एक परिवारको दुःख जस्तो भएन । गाउँनै शोकमा छ ।’–उहाँले भन्नुभयो–‘बाँकी रहेका घरहरुले मात्रै सहयोग गर्न मुस्किल परेको छ ।’
बल्लबल्ल अडिएको कच्ची घर । देख्दै अप्ठ्यारो । सेतो बस्त्रमा कलिलो अनुहार । ढोकै छेउमा टुसुक्क बसेकी १६ वर्षीया इशा कार्की । आमा ४२ वर्षीया सिता र दुई वर्षीया बहिनी अनुष्काले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाए । किरिया कर्म इशाको काँध छ । उनी मङसिर १९ बाट आमाको किरिया बसेकी छन् । बुवा प्रेम कार्की मजदुरीको लागि भारतमा हुनुहुन्थ्यो । दुर्घटनाको खबर सोही दिन नै थाहा पाउनुभयो । पत्नी र छोरी गुमाएका कार्की विक्षिप्त हुनुहुन्छ । उहाँ १८ गते साँझ घर आउनुभयो । पत्नी सिताले मेलापातबाटै घर धान्नु भएको थियो । प्रेम भारतमा काम गर्नुहुन्थ्यो । अब छोरी मात्रै घरमा भए । ‘साना छोराछोरी छोडेर कसरी फर्कर्ने, काम नगरे उपाय छैन ।’–आँसु पुच्छ्दै कार्कीले भन्नुभयो–‘दैवले विचल्ली पार्‍यो ।’ इशा कक्षा सातमा पढ्नुहुन्छ । १० वर्षीया बहिनी पुजा कक्षा दुईमा । अर्धवार्षिक परीक्षा सञ्चालन भइरहेकै बेला दुर्घटना थियो ।
बुवा चन्द्रदिप बस्नेत परदेश । आमा मिनाको दुर्घटनामा ज्यान गयो । छुट्टिएर बसेको परिवारमा १३ वर्षीय सुनिल र नौ वर्षकी बहिनी रविना मात्रै । दाजुबहिनीकै अर्धवार्षिक परीक्षा थियो । परीक्षा राम्रो गर्न भन्दै हिँडेकी आमा फर्किनन् । परीक्षा र आमा दुवैबाट वञ्चित भएकाले सुनिलसँगै नौ वर्षीया बहिनी रबिना बस्नेत पीडामा हुनुहुन्छ । त्यसमाथि सानो उमेरमै आमाको काज किरियाले सुनिललाई थप पीडित बनाएको छ । ‘सानो मान्छे आमाको शोकले आफैँ पीडामा छ । त्यसैमाथि काज किरिया र चिसोले थला पर्ने भो ।’–हजुरबुबा लालबहादुर बस्नेतले भन्नुभयो–‘जस्तो पनि भोग्नु पर्ने रहेछ ।’ मौसम चिसो र सानो मान्छे भएकाले खानपानका कारण स्वास्थ्यमा समेत समस्या परेको बस्नेतले बताउनुभयो । सोही गाउँकै भुमि कार्कीले पनि दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनुभयो । घरमा पति तिलबहादुर र १६ वर्षीय छोरा विष्णु कार्की हुनुहुन्थ्यो । आफू बिरामी, त्यो माथि सानो छोराले किरिया गर्नुपर्ने भएकाले थप पीडा भएको तिलबहादुर कार्कीले बताउनुभयो । उहाँले आमा नभएको पीडा त्यसैमाथि परीक्षा दिन नपाउँदा छोरा विष्णु थप चिन्तित बनेको बताउनुभयो । स्वास्थ्यमा समेत समस्या देखिएको छ ।
सोही गाउँका महेन्द्र कार्कीले पनि दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनुभयो । १७ वर्षीय छोरा मेघराज र १३ वर्षीय छोरा प्रेम कार्कीले बुबाको किरिया थालेद्यनुभएको छ । महेन्द्र २० वर्षमा कुल पुजाकै लागि भारतबाट गाउँ आउनुभएको थियो उहाँ भारतमा नशारोग विशेषज्ञ डाक्टरका असिस्टेण्ट हुनुहुन्थ्यो । राम्रो कमाई भएकाले दुई छोराले राम्रोसँग पढाउनुभएको थियो । सानो परिवार खुसी थियो । ‘नियतिले खुसी सहेन त्यसैले बज्रपात पर्‍यो ।’–महेन्द्रका बुबा झवि कार्कीले दुःख व्यक्त गर्नुभयो–‘खाउँ–खाउँ, लाउँ–लाउँ भन्ने उमेरमा परिवार बिचल्लीमा परे ।’